၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက်နေ့သည် မြန်မာများရဲ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (အဘိဓမ္မာနေ့) ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာလများတွင် ခုနစ်လမြောက်ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီကုန်လုချိန်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလမှာ ကျရောက်ပါတယ်။
ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားသည် မယ်တော်မိနတ်သားအား တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ် ဟောကြားတော်မူပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွချီတော်မူပါတယ်။ သိကြားမင်းက ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊… Continue
Added by manawphyulay on September 28, 2009 at 8:11pm —
wordpress blogging engine ကို တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့
စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြိး wordpress blogging engine ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ website တွေနဲ့ blog တွေကို ဦးတည်ပြိး တိုက်ခိုက်လာတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ wordpress ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ worm တစ်ခုကြောင့်
သူဟာ နောက်ကွယ်မှာ ကွယ်ဝှက် ထားတဲ့ administrator အကောင့် တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး အဲဒီ အကောင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကို သိတဲ့ ဘယ်သူမဆို blog ရဲ့ admin dashboard နဲ့အတူ database တွေကို ၀င်ရောက်
Wordpress ကလည်း ဒီလုံခြုံရေး ယိုပေါက်ကို အသိအမှတ်ပြုထားပြီး… Continue
Added by manawphyulay on September 27, 2009 at 7:51pm —
Asp.net tutorials with C#(Viual Studio 2008)
I had made some tutorials myself. They are intended for those who are starting to learn asp.net Please let me hear your feedback.
If you find them useful I will upload more.
(I add some music background in case you get bored with my voice :-) )
Multilayer Support:… Continue
Added by Wayne on September 26, 2009 at 3:00pm —
Some men has filters but some doesn't (non IT related joke)
One of our ex college always peeabit on the floor . some people complaint about that. One day , our office admin girl asked me why he always pee like that. So I simply replied like this.
" This is because we, man, some of us has filters likeashower head (uncut) but some doesn't hasafilter , just like an open tap (cut). Maybe because of our ex college hasashower head filter on his. That's why he is unable to know where the pee will go exactly. "
After that my admin… Continue
Added by Marius on September 26, 2009 at 1:30pm —
Myanmar ICT Exhibition Oct-2009
Myanmar ICT Exhibition Oct-2009 သို့ပါဝင်ပြသလိုသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြခန်းနေရာများကို မဲနှိုက်သည့်စနစ်ဖြင့် ခွဲဝေချထားပေးခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း ၆၉ဖွဲ့ ပါဝင်ပြသကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar ICT Exhibition Oct-2009 ကို ၂ဝဝ၉ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၁၈ ရက် နေ့ အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါမည် ။
Sr.No Company Name Booth No
1 Shwe La Min Negar (Acer) A1
2 Citicom A2
3 Lucky Bird A3
4 Myint Mo Myint (MSI) A4
Added by Wai Yan Min Min on September 26, 2009 at 12:13pm —
IT နှင့် ဂျပန်စာတွင်စိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များအတွက် အခွင့်အလမ်း
Myanmar DCR Co., Ltd မှဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့်ပက်သက်သော ရှင်းလင်းပွဲ
နေ့ရက် - ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်(တနင်္ဂနွေ)
ပထမအကြိမ်ရှင်းလင်းပွဲ - ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ နာရီ
(Reception Time ၉း၃၀ နာရီ)
ဒုတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းပွဲ - ၁၄း၀၀ မှ ၁၆း၀၀ နာရီ
(Reception Time ၁၃း၃၀ နာရီ)
နေရာ - CHATRIUM Hotel (အမှတ်
၄၀၊ နတ်မောက်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်)၊ (ယခင်Nikko Hotel)
ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းပွဲ၏ အကြောင်းအရာများမှာ… Continue
Added by manawphyulay on September 23, 2009 at 7:16pm —
I foundauseful link for Asp.net C# and VB developers
I found this link when I was surfing on the internet. Some of you might already know.... This site can transform C# code to VB or VB to C#
I do not think it will work 100% perfect. But hopes help
here is what I did, I put some C# code and it returned me with vb code
Added by Wayne on September 23, 2009 at 1:00am —
According to wikipedia, DTO isadesign pattern used to transfer data between software application subsystems.
you can also see DTO as corej2eepatterns.
martin fowler said
remote call are expensive.
If you need to reduce the number of calls,use DTO. DTO can hold all the data for that… Continue
Added by dev2709 on September 22, 2009 at 11:28pm —
No Comments Amazing Special Day for Blood Donors
We are very happy to inform you that Amazing Special Day for Blood Donors.
Fortunately on October 3, 2009 Saturday is Full Moon Day of Thadingyut and we are going to holdaCeremony of Blood Donation, Yin Khone Than Blood Donation Association’s 15th time of Blood Donation.
So let’ we will be pray and welcome to The Buddha by our blood donating.
Full Moon Day of Thadingyut and our association Blood Donation date are… Continue
Added by Patrick on September 21, 2009 at 7:28pm —
The Tools and Apps I Used
IT Pros တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကျွမ်းကျင်မှု့နယ်ပယ်၊ နည်းပညာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ မတူသလို အသုံးပြုတဲ့ Tool တွေ Application တွေလဲ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး... တစ်ချို့ Tool တွေက သုံးရကောင်းမှန်းမသိလို့သာ၊ သုံးလိုက်ရင် အများကြီး ကိုယ့်အတွက် လွယ်ကူ လျှင်မြန်သွားတာတွေ တစ်ပုံကြီးပါ...
ကျွန်တော် ဖတ်နေကြ Blog တစ်ခု ရဲ့ Author က သူသုံးနေကြ Apps တွေကို Share ပေးထာတာကို အားကျလို့ ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Tool တွေနဲ့ App တွေကို… Continue
Added by Ei Maung on September 20, 2009 at 1:30am —
တချို့ သူငယ်ချင်း beginner များအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
ပုံတစ်ပုံကို သူများကိုမပြင်ခိုင်းပဲ ကိုယ့်ဘာသာပြင်မယ်ဆိုရင် ပြင်နိုင်အောင် လေ့လာချင်ရင်
photoshop guide . ဘာမှမသိသေးပါဘူး သူများရေးပြီးသားတွေ့လို့ တင်လိုက်တာပါ
link ... Added by manawphyulay on September 16, 2009 at 12:53pm —
ကျွန်မ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ဘာလို့ ပေးသလဲဆိုတော့ အဘွားရှိစဉ် ကျွန်မငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက ပြောဆိုခဲ့ဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းလေးကြောင့်ပါပဲ။ သမီး လူရယ်လို ဖြစ်လာရင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို လုပ်ရမယ်တဲ့။ လူတိုင်း လောဘ
မောဟတွေနဲ့ မကင်းရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဘွားက အများကြီး မလုပ်ခိုင်းပဲနဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကနေ ကြီးကြီးမားမားထိအောင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုတော့ လုပ်ပါလို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။… Continue
Added by manawphyulay on September 15, 2009 at 1:00pm —
For men may come and men may go . . . .
I just recalled my memory that the poem I memorized in my high school. 10th Standard (now known as Grade 11 :D ).
The poem is entitled "The Brook" and composed by Alfred Lord Tennyson.
The most like best part of the poem is "For men may come and men may go but I go on forever".
And I really feel those words by reading threads on Forums in these days.
For threads may come(post) and go(pass) but i go(read) on forever.
I just feel afraid of NATO.… Continue
Added by Aung Aung on September 13, 2009 at 10:04pm —
My2cents for novices
It is very admiring to see that many MMITPro members pointed out that ill-practicses existing in Myanmar IT industry and senior members who have big influrence in this industry are brain stroming to sort these out. I believe that all these voluntery contributions are part of the process of tranforming the landscape of our IT industry. Kudos to all of you.
But I haveafew pieces of advise for yet-to-became-IT-professionals and students.
Since your voices and calls for… Continue
Added by Kyaw Zaw on September 11, 2009 at 3:17pm —
Reflection allows the developer to dynamically create object and calling its methods.
Let's look at the following two ways to achieve the same result.
//Normal way to call an object
BusinessObject bo=new BusinessObject();
//Reflection way to call an object
object retval = null;
Assembly assm = Assembly.Load("MyApp");
Type objType =… Continue
Added by dev2709 on September 10, 2009 at 12:14am —
using Enum.IsDefined in c#
I wrote some c# code today for Notification Engine. Unfortunately, I need to write hard code in this time.
Problem is I have to serialized the object in different way based on Method Name.
version 1 - code sample
if (retVal != null && mni.MethodName==’GetFailedEmail’))
else if (retVal !=null)
xml =… Continue
Added by dev2709 on September 8, 2009 at 9:32pm —
No Comments စိတ်ကို အစိုးမရ၍ သံသရာ မျောရပုံ
စိတ်ကို အစိုးမရ၍ သံသရာ မျောရပုံ
ယခုအခါ ဘဝသမ္ပတ္တိ (ဘုရားသာသနာတွင်း၌ လူဖြစ်ရခြင်း) အစီးအပွားဆိုသည်ကား ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒဒုလ္လဘနှင့်တကွ မနုဿတ္တဒုလ္လဘ-တည်းဟူသော ဘဝသီလ၌ ရရှိကြုံကြိုက်၍ နေကြသည့်အခါ၌ ဂဟဋ္ဌ (အိမ်ရာထောင်သူ) ဖြစ်သူလူတို့မှာ အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ၌ ကောင်းစွာတည်၍ ကာယဂတာသတိ အလုပ်၊ သမထကမ္မဋ္ဌာန်း အလုပ်၊ ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း အလုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ အားထုတ်မှုကို ဘဝသမ္ပတ္တိစီးပွားမှု ဆိုသတည်း။
သမထမှု ဝိပဿနာမှု၏ ရှေ့အဖို့၌… Continue
Added by Pyae Phyo on September 5, 2009 at 12:19am —
ဝိညာဏ်နှင့် သညာ သိမှုအထူး
ဤအရာ၌ ဝိညာဏက္ခန္ဓာသိမှုနှင့် သညာက္ခန္ဓာသိမှုကိုလည်း ခွဲခြမ်းရာ၏ ။
၆-ဒွါရ၌ ဆိုက်တိုက်လာသော အာရုံတို့ကို သင်းကားမြေ၊ သင်းကားရေ အစရှိသည်ဖြင့် သိမြင်ဖော်ပြ၍ သွားမှုသည် ဝိညာဏ်၏ သိမှုတည်း။ သညာ၏ သိမှုမဟုတ်။
ဝိညာဏ်ဖော်ပြ၍ သွားသမျှကို နောင်မမေ့ရအောင် မှတ်မှုသည် သညာ၏ အမှုတည်း။ ဝိညာဏ်၏အမှု မဟုတ်။
ဝိညာဏ်အလိုအားဖြင့် ရှေ့သို့ တွေ့ကြုံသမျှကို ထင်မြင်သိကင်း၍ သွားနိုင်ရာ၏ ။ တွေ့ကြုံပြီးကို ပြန်၍ တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ… Continue
Added by Pyae Phyo on September 2, 2009 at 11:28pm —
No Comments ဝိညာဏက္ခန္ဓာ၌ အဓိပ္ပါယ်အကျဉ်း
ဤကျမ်း၌ကား ပုဗ္ဗင်္ဂမကိစ္စ (ပုဗ္ဗ-ရှေ့၊ ဂမ-သွားခြင်း။ ကိစ္စ-အမှု)ကို ပဓာနပြု၍ ဝိညာဏက္ခန္ဓကို ရှေ့ထားပေအံ့။
၁။ ထွေထွေလာလာ၊ သိမှုမှာ၊ ခန္ဓာ ဝိညာဏ်မှတ်။
၂။ ခံသာ၊ မခံသာ၊ လျစ်လျူမှာ၊ ဝေဒနာ ဟုမှတ်။
၃။ မှတ်သိ လိမ္မာ၊ မမေ့ရာ၊ သညာ ဟူ၍မှတ်။
၄။ စေ့ဆော်ကြောင့်ကြ၊ စိုက်သမျှ၊ သင်္ခါရ ဟုမှတ်။
ဝိညာဏက္ခန္ဓာ၌ "ထွေထွေလာလာသိမှု" ဆိုသည်ကား -
၁။ မြင်မှုခေါ်သော သိမှုတစ်ပါး။
၂။ ကြားမှုခေါ်သော သိမှုတစ်ပါး။
၃။ နံမှုခေါ်သော သိမှုတစ်ပါး။
Added by Pyae Phyo on September 2, 2009 at 11:26pm —
PDF Search V1.0
Android L သို့ ( စတင်ခြင်း)
Android L သို့ အမြည်းနည်းနည်း
Executive Project Secretary (1) Post
Myanmar Digital Clock Widget
2014July (4)June (5)May (5)March (1)January (2)2013December (2)October (1)September (2)July (1)June (2)May (1)April (1)March (2)February (5)January (11)2012December (2)November (4)October (18)September (9)August (3)July (8)June (10)May (5)April (9)March (4)February (15)January (4)2011December (3)November (10)October (37)September (11)August (20)July (29)June (21)May (81)April (32)March (41)February (45)January (64)2010December (21)November (14)October (16)September (18)August (27)July (18)June (21)May (24)April (14)March (33)February (41)January (33)2009December (52)November (42)October (26)September (28)August (29)July (27)June (23)May (28)April (24)March (34)February (49)January (53)2008December (72)November (54)October (72)September (41)August (26)July (43)June (21)May (19)April (11)March (19)February (7)January (21)2007December (27)November (40)1999November (13) Welcome toMyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals